နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: စမ်းသပ်မှု သေးသေးလေးတွေ
ရေးသားသူ Ko Boyz at 12:46 AM
juli March 29, 2009 at 1:15 AM
အကျိုးနဲ.. အယ်လ်လွန်းဝါသီချင်းတွေကို ဖျက်ဦးမလို့တဲ့..
ATN March 29, 2009 at 1:57 AM
Acid က FL Studio နဲ့ အတူတူပဲ ထင်တယ်... ကိုဘွိုက်ဇ်လုပ်ထားတာလေးတွေ ကောင်းသားပဲဟာ...
ဇနိ March 29, 2009 at 4:03 AM
ချကားမပီတာကိုပါ အတုခိုးထားတာကိုးး)
ThuHninSee March 29, 2009 at 7:14 AM
JuneOne March 29, 2009 at 7:29 AM
၀ိုင်းဝိုင်းရဲ့ သီးချင်းကို ဖျက်တဲ့ ဘွက်ဇ်ဘွိုင်းပေါ့။
MrDBA March 29, 2009 at 9:36 AM
ကောင်းပါတယ်ဗျ။ ကျွန်တော်တောင် ပိုးပြန်ဝင်လာပြီ။ ခင်မောင်တိုးသီချင်းတွေ ဖျက်ဦးမယ်။ အဲလေ ဆိုဦးမယ်ပြောတာ။ ခုနောက်ပိုင်း အသံနဲ့ရော ပြန်ဆိုပါဦးလား။ အသက်အရွယ်ကို လိုက်လို့ အသံတွေ ဘာတွေပြောင်းသွားနိုင်တယ်လေ။
:P March 29, 2009 at 10:12 AM
ဘွိုင် ဘွိုင်းးးးးးး carry on!!!
mabaydar March 29, 2009 at 11:14 AM
ကိုဘွိုင်း.. မဗေဒါတောင် စမ်းချင်လာပြီ.. အဟီး...
mabaydar March 29, 2009 at 11:27 AM
ကိုဘွိုင်း အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲတော့ မသိဘူး... အသံကို နားထောင်ရတာတော့. ခပ်ငယ်ငယ်ကောင်လေး အသံနဲ့တူတယ်...
ကြည် March 29, 2009 at 12:13 PM
ဒါက ဘွိုက် ရဲ့စတိုင်နဲ့ဆိုထားတာပေါ့လေ။ နားထောင်သွားပါတယ်။အယ်လ်လွန်းဝါ သီချင်းလေးတွေရလို့ ဆိုဖြစ်ရင်လည်းရှယ်ပါအုံးနော့။ စီးရီးထုတ်ရင်လည်း အားပေးမယ်။(အတည်ပြောတာ)
Life is for Success March 29, 2009 at 12:52 PM
tha min lae pyan not bad.... really nice....
ကလူသစ် March 29, 2009 at 2:58 PM
လောကကြီးကို စိတ်ကုန်တာ အဲ့တာတွေလဲပါတယ် :(
Ko Boyz March 29, 2009 at 3:09 PM
အခုလို ချီးကျူးထောပနာ ပြုတဲ့ စကားလေးတွေ တစ်လှေကြီး ရတဲ့ အတွက် နောက်ကို ဒီလိုမျိုးတွေ ထပ်ခါ ထပ်ခါ တင်ပေးပါမယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း... ဟိဟိ
PAUK March 29, 2009 at 3:13 PM
ဒီ ဘွိုင် ဘွိုင်း ဆိုတဲ့ အဆိုတော်လဲ ကောင်းတာပဲ
Talkii March 30, 2009 at 7:21 PM
အသံကတော့ မဆိုးပါဘူး ဒါပေမယ့် ၀ိုင်ဝိုင်းလို ဆွေးဆွေးမြေ့မြေ့အသံဖြစ်သွားအောင် ကောင်မလေးကို အသဲခွဲခိုင်းလိုက်ရင် ပိုကောင်းသွားမယ်။ :) အသံ effect လေးတွေထည့်ထားတာ လန်းတယ်ဗျာ။ အားပေးတယ်
Ko Boyz March 31, 2009 at 10:06 AM
အခုနေများ ပြန်ဆိုလိုက်ရင် ၀ိုင်ဝိုင်း လက်မှိုင်ချသွားရမယ်...။
အက်ဖ်ဖက်လေးတွေက အသံနည်းနည်း ခန်းခြောက်နေလို့ စိုသွားအောင် လွင်လွင်လေး ထည့်ပေးလိုက်တာပါ။
မိုက်အင်ပွတ်က နွိုက်စ်နည်းနည်းများ သွားလို့ ဖျောက်ချင်လို့ပါ..။
ဖြူတုတ်လေး October 17, 2009 at 12:38 PM
Someone told me to go and listen to your songs coz you sang so well. I am normally quite critical of one's style of singing and voice (not necessarily I know so much about music) but I have no complaint here. Great Job!
By the way, how do you make the sound to be recording quality not like karaokae quality?
Ko Boyz October 17, 2009 at 2:04 PM
I'm using Sony Acid 5.0 to record and edit the song.
first record the karaoke song and add it the software.
second play that song and sing along while recording.